ညအိပ်ရာမဝင်ခင် ရေသောက်ရအောင် - Hello Sayarwon
ညအိပ်ရာမဝင်ခင် ရေသောက်ရင် ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို ထောက်ကူပေးလဲ……………..
ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေမှုက စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။ ကိုယ်တွင်းမှာ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတဲ့အခါ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာ၊ စိတ်ပူပန်တာ၊ စိတ်ဖိစီးတာ၊ စိတ်ခံစားမှု ပြောင်းလဲတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ။ တက်ကြွလန်းဆန်းမှု မရှိတာ၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းတာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တွင်းမှာ ရေဓာတ်နည်းသွားတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အကောင်းဆုံးလည်ပတ်နိုင်စေဖို့အတွက် အစာချေဖျက်ဖို့နဲ့ အညစ်အကြေးစွန့်ထုတ်ဖို့အသုံးပြုမယ့် အူမကြီးနဲ့ အူလမ်းကြောင်း တစ်လျှောက်က ရေတွေကို စုပ်ယူအသုံးပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ဝမ်းချုပ်တာ အပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
When is the best time to drink water? https://www.medicalnewstoday.com/articles/321250 Accessed Date 11 May 2020
Drinking Water Before Bed https://www.healthline.com/health/drinking-water-before-bed Accessed Date 11 May 2020
Should I Drink Water Before Bed? How Hydration Impacts Sleep https://laylasleep.com/drinking-water-before-bed/ Accessed Date 11 May 2020
Should You Drink Water Right Before Going to Bed? https://www.sleepadvisor.org/drinking-water-before-bed/ Accessed Date 11 May 2020